पे’टमा पानी भरिएर सा’स फेर्नै कठिन, जीवन ब’चा’इदिन या’चना गर्दै ४ छोराछोरीकी आमा ! - dautarimedia.com
पोखरा १४, चाउथे, बेलचौतारामा डेरामा बस्दै आएका जिते नेपाली मनकारी घ’र’भे’टी नहुँदो हो त यतिबेला सडकमा पुगिसकेका हुन्थे ।
आर्थिक अभावमा बिरामी श्रीमतीको उपचार गर्न सकेका छैनन् । श्रीमतीको रेखदेखमा ख’टि’नुपर्दा मजदुरी काम गर्न बाहिर निस्कन समेत पाएका छैनन् ।
श्रीमतीको पे”ट फु’लि’ए’र श्वा’स नै रोकिने अवस्था भइसकेको छ । ४१ वर्षीया श्रीमती सरीताको क’ले’जो रो’गका कारण पे’ट फु’लि’एको छ ।
तत्काल पे’टको पानी फा’ल्नु’पर्ने डाक्टरले सुझाएका छन् । तर उनीसँग पैसा छैन । ३ वर्षअघिदेखि नै रोगले थलिएकी श्रीमतीलाई नेपालीले मजदुरी काम गरी पैसा जम्मा गर्दै उपचार गर्दै आएका थिए ।
घरभेटी दुर्गा नेपालले ५ महिनाअघि घरमा बसेदेखिको भाडा लिएकी छैनन् । उनैले वडामा सहयोग उठाउन सिफारिसदेखि अस्पतालसम्म जान भाडाको ब’न्दोब’स्ती गरेकी छन् । तर अस्पताल पुगेपछि के ले उपचार गर्ने ? एक पैसो छैन भन्दै श्रीमतीलाई कोठाबाट अस्पताल लैजान सकेका छैनन् । घरभेटी दुर्गाले भनिन् – ‘एकदमै गरिब परिवारका रहेछन् । हाम्रो घरमा आएपछि बिरामी नै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म भाडा पनि लिएका छैनौं । म पनि एकल महिला परेँ ।
आफूले सक्दो त गरेकै छु । नगद सहयोग गर्न सकिएन । त्यसैले मिडिया गु’हा’रे’की हुँ ।’ जिते नेपाली ४८ वर्षका भए । घर धादिङको ज्याम्रुङ हो । बुवाआमाको अभावमा हुर्किएका उनको नागरिकता पनि छैन । त्यही कारण श्रीमती सरीताको पनि नागरिकता बनेको छैन । उमेर पुगेका छोराछोरीको पनि नागरिकता नहुँदा जागिर छैन । लकडाउनपछि मजदुरी काम गरेरै नेपालीले श्रीमतीको उपचार गरिरहेका थिए । अहिले पैसा नै नभएर कलेजोले काम नगर्दा पेटमा भरिएको पानी निकाल्न सकिएको छैन ।
Previous: सौतेनी आमाको कुटपिटले दुबै अँखा फुट्यो ?छोएर सेयर गरीदिनु होला नानिको बुबासम्म यो फोटो पुगोस्?
Next: तालिवानले घर-घर गएर मानिसको खोजी गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको दावी